Instagram ၏အောင်မြင်မှုကို Apple ကြေညာမည် eReaders အားလုံး
Instagram ၏အောင်မြင်မှုကို Apple ကြေငြာ
စာအုပ်များ (သို့) ebooks များသည်လူမှုရေးကွန်ရက်များမှတဆင့်ဖော်ထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်ခြင်းများအတွက်အသစ်အဆန်းတော့မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ebook ရောင်းရန်တာ ၀ န်ရှိသောကုမ္ပဏီများကအလားတူအရာများပြုလုပ်သည်ကိုသတိမပြုမိဘဲဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့ Apple ကိုရည်ညွှန်းသည်။
ရသည်မှာအလွန်ကြီးစွာသောအသေးစိတ်ကုမ္ပဏီကြီး တရား ၀ င် Instagram အကောင့်မှတစ်ဆင့်သင်၏အောင်မြင်မှုများအကြောင်းပြောခြင်း၊ iBooks တွင်အောင်မြင်မှုအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ကြေငြာခြင်းများစတင်ခြင်းကိုစတင်ပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်နာမည်ကျော်လူမှုကွန်ယက်သည်အက်ပလီကေးရှင်းကိုအယ်ဒီတာများနှင့်စာရေးသူများအားပေးမည့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် ebook ကိုမြှင့်တင်ရာတွင်အသုံးပြုသည့်နောက်ထပ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အက်ပဲလ်ဟာ Instagram ကို ebooks ရောင်းတဲ့ပထမဆုံးကုမ္ပဏီမဟုတ်ဘူး
Apple ၏မဟာဗျူဟာအသစ်သည်ဂီတများကိုသာမက iBooks တွင်ပါ ၀ င်သည့်ထုတ်ကုန်များကိုကြော်ငြာနှင့်ကြော်ငြာများတွင်လူမှုကွန်ယက်များအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိ Twitter နဲ့ Instagram တို့မှာအကောင့်တွေရှိတယ် နောက်လိုက်များသည်အယ်ဒီတာသတင်းကိုမြင်နိုင်ရုံသာမကစာရေးသူများနှင့်စကားပြောဆိုနိုင်သည်သို့မဟုတ် ebooks မှစကားစုများကိုမှတ်ချက်ပေးနိုင်သည်။ အယ်ဒီတာအဖွဲ့ခေါင်းစဉ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖန်တီးနိုင်သည်။
အဆိုပါအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ် ဆိုရှယ်မီဒီယာကို အသုံးပြု၍ ebooks သို့မဟုတ် book များကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်သေးငယ်တဲ့စာအုပ်ဆိုင်များတွင်ပုံမှန်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသောအက်ပဲလ်ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီကြီးများအနေဖြင့် Amazon ရောင်းအားနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုရေးကွန်ယက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမကြာသေးမီကတူညီသောရည်ရွယ်ချက်အတွက် Twitter အကောင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင်၊ iBooks ebooks များသည် Facebook တွင်ရှိသည်.
ဤလမ်းကြောင်း၏အဖွင့်သည်စင်ကြယ်သောစျေးကွက်မျှသာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ၎င်းသည်စာရေးဆရာများကိုကမ်းလှမ်းရန်အခြားဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်မဟုတ်သကဲ့သို့၎င်းသည်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်ဟယ်ရီပေါ်တာစာအုပ်ရောင်းအားမြှင့်တင်ရေး။ ဤစာအုပ်သည်အလွန်အောင်မြင်နေပြီးဤမှတ်တမ်း၏ပထမဆုံးထုတ်ဝေမှုများတွင် JK Rowling နှင့်သူမ၏အလုပ်အကြောင်းဖော်ပြထားသည် တိုက်ဆိုင်မှု? သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? ebook များရောင်းရန် Instagram ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်စိတ်ကူးကောင်းသည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ကုမ္ပဏီများမှ » Instagram ၏အောင်မြင်မှုကို Apple ကြေငြာ